बालक निश्चल पाण्डेयका हत्याका दोषीले पाए सजाय | bhumionline
फोटोमा हत्या भएका बालक निश्चल (क्युट) पाण्डेय
Posted By: bhumionline Apr 29, 2017
महोत्तरी, १६ वैशाख ।
मिति २०७२ पुस ३० गते साँझ ६ बजेको समयमा जलेश्वर नगरपालीका वडा नं. १२ स्थित भिट्ठामोडबाट घर आउने क्रममा बालक निश्चल कुमार पाण्डेको अपरहण अपहरण गरिएको थियो । बच्चा अवेर रातीसम्म घर नफर्केकोमा मृतक बालकका वुवाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीमा वच्चा खोजतलास गरि पाउ भनि निवेदन दिएका थिए । निवेदनको आधारमा तथ्यहरु खोतल्दै जादा बच्चा अपहरणमा परेको आशंका लागेको तत्कालिन प्रहरी उपरिक्षक जनक भटटराईले बताएका थिए । उनले विभिन्न सवुत प्रमाण जुटाउदै जादा दोषीहरुको नाम वाहिर आएको र उनीहरुसंग अनुसन्धान गर्दा आफुहरुले नै अपहरण गरेको र बच्चा धेरै चित्याएपछि समातिने डरले हत्या गरेको स्विकारेका थिए । दोषीहरुले दिएको बयान कै आधारमा जलेश्वर नगरपालीका वडा नं. १३ स्थित खरघारीमा गाडेको थियो । यस घटनाका अभियुक्तहरु जलेश्वर १ का २७ वर्षिय पप्पु यादव,जलेश्वर ६ का २० वर्षिय गोविन्द कुमार मिश्र,जलेश्वर १२ का २७ वर्षिय सरोज पाण्डेय र सोहि ठाउका ३१ वर्षिय संजिव मिश्र र जलेश्वर ८ का शिवम चौधरीलाई जिल्ला अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षको लागि २०७२ फागुन ३ गते जलेश्वर कारागार चलान गरिएको थियो ।
Be the first to comment on "बालक निश्चल पाण्डेयका हत्याका दोषीले पाए सजाय"